IiAsos (ASC) zoVimba
Udidi: I-Asos (ASC)
I-Asos Stock Isivumelwano malunga nolwandiso lwaseMelika oluSetelwe ukuHambisa
Umthengisi wefashoni wase-UK kwi-Asos (ASC) ujongene nazo zombini iindlela ngalo mzuzu. Kwingxelo yayo ye-15 kaJulayi yorhwebo inkampani yabika ukuba ukuthengisa bekunyuke ngama-21% ngenxa yotshintsho "lokuhlala ekhaya".
Ingeniso yayiphezulu kwaye ibetha uqikelelo. Kwiinyanga ezine ukuya kumhla wama-30 kuJuni yatsala i- £ 1.29 yezigidigidi zeepawundi (i-1.79 yezigidigidi zeedola), inyuka isuka kwi-1.1 yeebhiliyoni zeepawundi kwixesha elidlulileyo kunyaka ophelileyo. Ikwachaze ukonyuka kwesiseko sabathengi esisebenzayo inyuke nge-4.59%, ukusuka kwi-1.2 yezigidi ukuya kwi-26.1 yezigidi.
Kodwa ulwamvila emsileni wesitetimenti lwabonakaliswa kukukhapha izimvo ezichaza inyani yokuba izinga lokukhula kwezi veki zintathu zidlulileyo zexesha eliphela nge-30 kaJuni laliphantsi kakhulu, besola ukungaqiniseki kukaCovid kunye nemozulu.
I-Covid isenokwenzeka ukuba inkulu kwezi zimbini zentloko. UAsos uthe wabona ukungazinzi kurhwebo kuqhubeka kwikota ekufuphi ngenxa yemeko yesifo esandayo.
Ngenxa yoku, ukukhula kwenqanaba lokukhula le-2020-21 iya kuba ngokubanzi ngokuhambelana nexesha lonyaka ophelileyo.
Ukongeza kwisithokothoko, mhlawumbi, yayiziindaba zokuba inkampani ayizukunyusa nawaphi na amaxabiso ayo ngaphandle koxinzelelo lwamaxabiso kwiziphumo ezinje ngamaxabiso eempahla kunye nemithwalo.
I-Asos ijongene nokunyuka kweendleko kodwa inganyusi amaxabiso ayo
Umphathi omkhulu u-Nick Beighton uveze ukungabikho kwegumbi lomlenze wokunyuka kwamaxabiso kunikwe uxinzelelo kukhuphiswano kumzi mveliso "wefashoni ekhawulezayo", kunye nezinto ezithandwa nguBoohoo ophefumla ezantsi entanyeni, njengamandla ohlobo.
Kwintetho yakhe ehamba nohlaziyo lwezorhwebo, uthe: "Asitshintshanga naliphi na amaxabiso ethu, ngokuchaseneyo, sityale imali eninzi kuyo kwaye sizakuqhubeka nokwenza njalo."
"Ukuqhubeka nokutyala imali eninzi kumthengi, kwishishini lethu, yeyona nto ifanelekileyo ukuyenza kwixesha eliphakathi nelide," wongeze watsho.
Ngokuqinisekileyo, ukungabikho kwamandla kwe-Asos yamandla amaxabiso kunokuba yingxaki ukuba ukunyuka kwamaxabiso kungqina ukuba neenkani ngakumbi kunokuba oosomashishini abaphambili beqikelela, kodwa oko kunokuba yingxaki ekwabelwana ngayo nabantu abakhuphisana nabo. Ngale ndlela, ukukwazi ukubamba amaxabiso kutyalo-mali kukhuselo lwezabelo zentengiso, njengoko kuchazwa nguBeighton, kodwa ikwayiyo nendawo ekhubekisayo malunga nokuzibophelela kwakhe ekukhuliseni intengiso kunye nesabelo sentengiso.
Sibonise isixa esifanelekileyo sokungakhathali ukuya kuthi ga kwi-Asos ukuya kutyalo-mali olunenzuzo ngalo mzuzu. Ngokukhawuleza emva kwengxelo yorhwebo, i-RBS isike ixabiso layo ekujolise kulo ukusuka kwi-7500p ukuya kwi-7300p.
Isitokhwe seAsos sithengiswa ngexabiso kwi-3893p.
Itshathi ngoncedo lwe-SharePad nge-3 Agasti 2021
Nangona kunjalo, singatsho ngokuqinisekileyo ukuba ezi zinto zingalunganga zigqithile, ngenkampani isenendawo eninzi yokwandiswa kolwandiso lwehlabathi- kwaye lithemba lokuba abanye kwintengiso banokungahoyi.
I-Asos isetelwe ukuqhekeza intengiso yase-US ngoncedo lweNordstorm
Amathuba e-Asos aziswa kugxilwe emva kokuba iindaba zikhutshwe kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kwengxelo yorhwebo lwentsebenziswano kunye ne-Nordstorm e-US, egxile kwi-brand ye-Topshop i-Asos efunyenwe kwiqela elithengileyo leArcadia kunye nezinye iilebhile ezizithengileyo. kunye nayo.
Ukufunda phakathi kwemigca, u-Asos ujonge ukwamkela isicwangciso-nkqubo 'sezitena kunye nokucofa' ukuze ekugqibeleni angene kwimarike yempahla yase-US ngendlela enentsingiselo.
Ngokugwetywa kukusebenza kwexabiso lesabelo kwimarike okwangoku ayikabi lixabiso kwinto enokwenzeka, njengoko ilindele ukubona ukuba ingadlala njani.
I-Nordstorm inezitena kunye nodaka e-US kwaye izibophelele kutyalo-mali ekuthengiseni ii-Asos brand kwiindawo "ezinefuthe eliphezulu" kunye nokubonisa iilebheli zeAsos kwiwebhusayithi yayo.
Ungathenga isitokhwe seAsos kwi-eToro. Ukufumana ngakumbi malunga nomthengisi, ndwendwela eyethu Uphengululo lwe-eToro iphepha
Ixabiso ekuvunyelwene ngalo kwisitokhwe yi-5847p, ipremiyamu enkulu ye-49% ngaphezulu kwexabiso langoku.
Ngokwokhuseleko lwephepha lomncono lenkampani, ikhava yayo yemali eqingqiweyo intle kakhulu yi-13.4 (umyinge weminyaka emi-3 ye-5.9). I-inshorensi ehlawulwayo engatshintshiyo iyafana nomyinge we-inshorensi kodwa iyalungiswa ukuze ibandakanye izibophelelo zokurenta nokuqeshisa ezizezinye zohlobo lwetyala, kodwa ngenxa yokuba kungekho nzala ihlawulwayo oku akubanjwanga ngumyinge we-inshorensi.
Ukuqikelelwa kokukhula kwe-EPS yi-19%, ngokusekwe kwimvumelwano yomhlalutyi, kunye nenkampani elinganiswe njengephumile. Imvumelwano yenzuzo yangaphambi kwerhafu kulindeleke ukuba ikhule ngama-32.9%.
Ukusukela kumda we-1085p orekhodwe ngasekupheleni kuka-Matshi 2020 isitokhwe siphinde safumana ukufikelela kufutshane-kwikota ephezulu ye-5933 nge-21 ka-Matshi kulo nyaka kodwa asilela ukubambelela kwezo nzuzo. Inkxaso iya kufumaneka kwingingqi ye-3532-3052.
Ukusukela ukuphela kwe-2018 isitokhwe sisebenze ngokungaginyisi mathe kwicandelo lokuthengisa le-FTSE 350 kwaye ubukhulu becala kulo nyaka liqhube kakubi i-FTSE 100 nayo, ke ukuthenga i-Asos yinto yentshukumo yesivumelwano, eqhubeka igxininiswa kukungabikho kwamandla kwi-stock .
Nangona kunjalo, ukomelela kwayo kwezezimali kunye nendlela ecacisiweyo yokufezekisa ukukhula e-US kuthetha ukuba ikwindawo entle yokukhulisa ixabiso lezabelo kweli nqanaba.
Isalathiso samandla esihambelanayo (i-RSI) sisondela kumhlaba ogqithileyo ngokufundwa kwama-35. Isitokhwe siphume ngaphezulu nge-19 kaJulayi emva kokuchukumisa i-29 kwi-RSI.
Ngakumbi ekufumaneni eyona ilungileyo imiqondiso yesitokhwe ndwendwela isikhokelo sethu esibanzi ngokunqakraza kwikhonkco.
Ukuphela kukaJulayi abahlalutyi beCredit Suisse baqaphele ukuba ukungaqiniseki kukaCovid kuya kubambezela iimpahla kunye nezihlangu eYurophu xa kuthelekiswa nezinye zentengiso, kodwa ijelo lika-Asos kwi-Intanethi lithetha ukuba kunokuba lula ukuba ngumxhamli waso nasiphi na isantya sokuvula kwakhona ngokungathanga ngqo iseka izitena kunye nemijelo yodaka e-US kunye ne-Nordstorm ngokubambisana.
Sikala ama-Asos kukuthenga okwethutyana.
Ungathenga i-Asos kwiqonga lotyalo-mali lwe-eToro nge-0% yekhomishini.
tags I-Asos (ASC), abathengisi befashoni, isitokhwe somthengisi